Itoobiya Oo Sheegtay Inay Ciqaab Adag Marsiinayso Cidda Samaysay Khariidaddii Qaldanayd Ee Muranka Dhalisay, Raalligelina Siisay Somaliya - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaItoobiya Oo Sheegtay Inay Ciqaab Adag Marsiinayso Cidda Samaysay Khariidaddii Qaldanayd Ee Muranka Dhalisay, Raalligelina Siisay Somaliya
Itoobiya Oo Sheegtay Inay Ciqaab Adag Marsiinayso Cidda Samaysay Khariidaddii Qaldanayd Ee Muranka Dhalisay, Raalligelina Siisay Somaliya
Addis Ababa (JigjigaOnline) – Dawladda Itoobiya ayaa mar kale ka hadashay khariidaddii qaldanayd ee qaaradda Afrika ee lagu baahiyey website-ka wasaaradda Arrimaha dibedda, kaas oo ay ka maqnayd Somaliya oo gebi ahaanba lagu daray dhulka Itoobiya.
Khariidadda qaldan oo Sabtidii lagu daabacay website-ka Wasaaradda Arrimaha dibedda, ayaa waxa Koonfurta Somaliya oo dhan lagu beddelay Itoobiya, laakiin Somaliland ayaa si gaar ah looga reebay oo loogu muujiyey dal buuxa.
Wasaaradda Arrimaha dibedda ayaa isla maalintaas war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay inay saxday qaladka dhacay oo ay ku tilmaantay wax aan la aqbali karin, kana shaqaynayaan sugidda ammaanka shabakaddeeda, hase yeeshee, maanta ayaa waxa si buuxda saxaafadda ula hadlay Afhayeenka wasaaradda Arrimaha dibedda oo raalligen ka bixiyey arrintaas.
Nebiyat Getachew oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Addis Ababa ayaa waxa uu sheegay in Itoobiya ay aad uga xun tahay khaladaas oo ay raalligelin buuxda u dirtay jamhuuriyadda Somaliya.
Nebiyat ayaa intaasi ku daray inuu socdo baadhitaan ku saabsan sababta keentay in sawirkan lagu daabaco websiteka wasaarada islamarkaana ay ciqaab la kulmi doonto cid kasta oo arrintan lagu helo inay ku lug leedahay.
Afhayeenka ayaa sheegay in sawirkani uu dhaawac ku yahay xidhiidhka iyo ixtiraamka walaaltinimo ee ka dhexeeya Somaaliya iyo qaarada inteeda kale isl amarkaana uu yahay mid muujinaya qadarin la’aan ayna aad uga xun yihiin.
Sawirkan oo maalmihii lasoo dhaafay aad looga hadal hayay baraha bulshada ayaa ka cadhaysiiyay Soomaalida daafaha caalamka ku nool kuwaas oo si wada jir ah uga dareen celiyay.
Itoobiya Oo Qabatay Timaha Macmalka Dumarku Xidhaan Oo Kootarabaan Ah